mbavha monya bhazi kombi
dofo jongwe malawi jarzin
kudhen kwavo vakaita zvekutopaza imba vachida kuextenda garden,
Hanzi iye manje kufambafamba achi chemera kunzi gen'a iye ari one,
Ikokani kuzochemera zve kurara mukona imba yavo iri yeround,
nepaye paaichemera kurara pakati ivo vari vavairi
Hanzi imba yenyu ihure yakanzwa muridzo invhurika maketeni
Kumba kwenyu kune brugwa one atanga kumuka ndiye anoripfeka
Nzeve dzinomisa mota maoko ari muhomwe.
Wakapaza ma OK uchida kuba chikorobho
mumwe blazo aiita basa rekuti munhu akafa akavigwa ne coffin riri expensive iye woenda kunomufukunura usiku oba coffin racho ozotengesa.
Saka umwe usiku achibva 'kubasa' kwake kugrave yard akatakura coffin raanga aba pamusoro
akabva asanganidzana nemapurisa. Vakamubvunza kuti aiitei necoffin, iye ndokupindura achiti, "Vanopenga, havangambondiviga apa pandakati handidi saka ndiri kutoenda kunozviviga nechepamberi apo."
mbavha coffin mapurisa
Boni ane zimhuno ziguru. Saka nhasi seValentine's day atora musikana wake akagumira Grade 3 (ane makumbo makobvu)kuenda kuhotera. Vanga vachitaure zvakanaka fani.
Vasvika pamusiwo wehoterai Boni abva avhura door akati kumusikana "Ona Ladies" Musikana akati "aa IweOna Nose"
Apa anga achifunga kuti Boni amutuka achiti makumbo ake akakoresa.
ma problem ese disappear